हामी Bizum संग कहाँ किन्न सक्छौं? | ईकमर्स समाचार
हामी Bizum संग कहाँ किन्न सक्छौं?
ईकॉमर्स समाचार | 15/10/2021 13:00 | अद्यावधिक गरियो 28/10/2021 12:01 | वाणिज्य
यो मध्य २०१ 2016 मा धेरै पछि छ जब स्पेनिश वित्तीय संस्थाहरु (२)) को बहुमत हाम्रो देश मा Bizum शुरू भयो। यो नम्बर गयो क्रिसेन्डोमा ३२ वित्तीय संस्थाहरु र के बाँकी रहन्छ। पसलहरुमा पनि यस्तै हुन्छ। धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु यो अभ्यास मा सामेल हुँदैछन्, जुन यो जस्तो देखिन्छ जस्तो नयाँ छैन। हामी मध्ये धेरै लाई पहिले नै थाहा छ कसरी एक Bizum बनाउन तर, कुन पसलहरुमा तपाइँ यसको साथ तिर्न सक्नुहुन्छ?
दुबै भौतिक प्रतिष्ठानहरु र अनलाइन व्यवसायहरु Bizum द्वारा भुक्तानी को अनुमति दिन्छ। हाल, त्यहाँ ५ 598 businesses व्यवसायहरु छन् कि यो मार्ग स्वीकार गर्दा एक खरिद गर्ने। र व्यापार को यो सूची भित्र फार्मास्यूटिकल, एयरोस्पेस, ऊर्जा, कपडा, इलेक्ट्रोनिक, खेलकुद, टेलिफोन, स्वास्थ्य र कस्मेटिक क्षेत्रहरु को रूप मा विविध क्षेत्रहरु बाट कम्पनीहरु छन्। पनी लटरी प्रशासन मा यो भुक्तान र Bizum को माध्यम बाट स collected्कलन गर्न सकिन्छ।
उनीहरुबाट बाहिर उभिएका छन् कपडा ब्रान्डहरु जस्तै अगाथा रुइज डे ला प्रादा वा डेकाथलोन जस्तै खेल ब्रान्ड र कस्मेटिक कम्पनीहरु जस्तै Druni वा Primor। साथै एल Corte Inglés वा D supera सुपरमार्केट को रूप मा व्यापार। ऊर्जा क्षेत्र मा, Iberdrola वा इलेक्ट्रा Energía; र दूरसंचार क्षेत्र मा, को सबै ग्राहकहरु सुन्तला, ज्याजटेल र Amena उनीहरु Bizum को माध्यम बाट सम्बन्धित वित्तीय प्रक्रियाहरु पूरा गर्ने सम्भावना छ।
प्राविधिक क्षेत्रमा, त्यहाँ जस्तै कम्पनीहरु छन् Mediamarkt वा पीसी घटक। त्यहाँ पनी आईएमक्यू संग बीमा को क्षेत्र मा प्रसिद्ध नामहरु छन् र औषधि क्षेत्र भित्र अरु को बीच मा, Mifarma छ।
साथै यात्रा कम्पनीहरु जस्तै Alsa, एयर यूरोपा वा Logitravel उनीहरूले यो मोबाइल भुक्तानी प्रणाली, हाम्रो देश मा मुख्य रेलवे अपरेटर लाई पनि अनुमति दिन्छन्, रेन्फे.
यस तथ्य को बावजुद कि त्यहाँ Bizum उपलब्ध छ कि कम्पनीहरु को एक ठूलो संख्या हो, लेनदेन को बहुमत व्यक्तिहरु को बीच बनाइन्छ।
वास्तव मा, आधिकारिक Bizum डाटा को अनुसार, सञ्चालन को मात्रा हो कि यसको स्थापना पछि बाहिर गरीएको छ 370 मिलियन। र यो नयाँ भुक्तानी विधि मा सामेल भएका प्रयोगकर्ताहरुको संख्या १ million मिलियन प्रयोगकर्ताहरु बराबर छ। खातामा कि वर्तमान मा स्पेनिश जनसंख्या मात्र 17 लाख भन्दा बढी मानिसहरु छन्, लगभग 36% स्पेनीहरु पहिले नै Bizum प्रयोग.
यद्यपि Bizum हालसालै हाम्रो जीवन मा लोकप्रिय भएको छ, स्पेनिश बजार मा यसको प्रक्षेपण धेरै पहिले थियो। गयो पुरानो स्थानान्तरण छन्, अब हामी मात्र प्रसिद्ध Bizum को बारे मा सुन्नुहोस्। र हामी यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौं: यसले हाम्रो जीवन बचाएको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ईकॉमर्स समाचार » वाणिज्य » हामी Bizum संग कहाँ किन्न सक्छौं?
कसरी एक ट्रेडमार्क दर्ता गर्न
ईकामर्स: यो के हो